Vidio voninkazo sinoa voninkazo samy hafa tanana - fandefasana maimaim-poana ary tsy misy haba | WoopShop®
Tondra-kazo mamelana sinoa samy hafa tanana
Tondra-kazo mamelana sinoa samy hafa tanana tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Toerana niandohana: fu zhou, Sinoa
Fotoam-pijinjana: lohataona voalohany 2021
asa tanana: Vita tanana.
Fotoana fitehirizana: 36 volana
Inona no atao hoe Dite mamelana?
Ny Tea Blooming dia namboarina tamin'ny tsimoka dite maitso sy voninkazo maina azo hanina. Mametraka voninkazo maina azo hanina ho lasa tsimoka dite ho baolina dite kely izy, mitsonika miaraka amin'ny hanitry ny dite sy ny hatsaran'ny voninkazo. Mandraraka rano mafana ao anaty vera mandritra ny iray na roa minitra, mamony tsara ny baolina dite boribory, mba ho fihinam-boninkazo tsara tarehy miaraka amin'ny tsimoka dite maitso. Voajanahary, mahasalama ary lamaody io.
misaotra amin'ny serivisy tsara x
Fandefasana any urengo-66 andro vaovao, any Russia 10 andro.
Arahana zavatra hafahafa ireo entana. Efa tonga, ary amin'ny sisin-tany ihany amin'ny sisintany. Amin'ny tena dite dia tsy misy fanovana, toy ny fenitra. Minus noho ny fanerena anao handoa ny irakiraka ho an'ny fandefasana, na dia efa naloany aza izany tamin'ny voalohany rehefa nanafatra ... Angamba manana an'io ony io aho. Amin'ny ankapobeny, ny dite dia 5 *